यी हुन् ‘आइ लभ यू’ नभनी प्रेम ब्यक्त गर्ने १० तरिकाहरु, जसले बनाउँछ सम्बन्धलाई सुमधुर !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन् ‘आइ लभ यू’ नभनी प्रेम ब्यक्त गर्ने १० तरिकाहरु, जसले बनाउँछ सम्बन्धलाई सुमधुर !!
हुन त प्रेम अभिब्यक्त गर्नका लागि ‘आइ लभ यू’अर्थात म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नु जति प्रभावकारी केही पनि हुँदैन। यो साधारण तर सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो।
यो पुरानो जमाना देखि चलेको भाषा र तरिका पनि हो। तर जमाना बदलिँदै जाँदा ‘आइ लभ यू’ को अर्थ भन्दा अझै फरक भाषामा मानिसहरु प्रेम ब्यक्त गर्न मन पराउन थालेका छन्।
यहाँ ‘आइ लभ यू’ नभनिकन प्रेम ब्यक्त गर्ने तरिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कसैलाई प्रस्ताव गर्दा वा प्रेम ब्यक्त गर्दा ‘आइ लभ यू’ नभनीकन पनि कसरी भन्ने त ? थाहा पाइराख्नुस् १० बैकल्पिक भाषा र अभिब्यक्ति।
कसैलाई आफूले मन पराउने कुरा बताउनु छ वा प्रेम ब्यक्त गर्नु छ भने ‘आइ लभ यू’ को सट्टा आइ अडोर यू अर्थात म तिमीलाई कदर गर्छु वा सम्मान गर्छु भन्न सकिन्छ। यसले पनि प्रेम ब्यक्त गर्छ र उस्तै भावना जगाउँछ।
म तिमीप्रति नतमस्तक छु
‘आइ लभ यू’ भन्नुको साटो कहिले काँहि आई नीड यू बाई माई साइड अर्थात म तिमी मेरै छेउँ छाउ होउ भन्ने चाहन्छु भनेर पनि प्रेम ब्यक्त गर्न सकिन्छ । यसले तपाइँले उक्त ब्यक्तिप्रति अनुभव गर्ने विशेष भावना झल्किन्छ।
‘आइ लभ यू’ भन्नुको साटो यू एण्ड मी अलवेज अर्थात म र तिमी सदाका लागि भन्ने अभिब्यक्तिबाट पनि प्रेमिल अनुभव गराउन सक्नु हुन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार